Waad Mahadsantahay! - Transportation | seattle.gov
Si laguugu mahad celiyo qaadhashadada xog ururin, waxaad ka qeybqaadan kartaa bakhtyanasiib aad ku guuliseysan karid $50.00 oo kaad hadiyeed ee Starbucks ka. Weynu isticmaaleynaa warbixintaada shaqsiyanka ee lagala xiriiro hadaad ku guuleysato bakhtiyaanasiibka. Warbixinta shaqsinyanka kuu ah kuma xirna jawaabahaaga xog uruurin.
Emayl ama lumbarka telafoonka
waxaad ka qeybqaadan kartaa bakhtyanasiib aad ku guuleysan kartid
Sahanka wuu xirmayaa 10/19/18